CORBITION cryogenic machubhu anoshandiswa mukuchengetedza zvipenyu zvekushambadzira sezvinhu zvinoraswa murabhoritari, izvo zvinogadzirwa kubva kune yepamusoro polypropylene. Mhando mbiri dzetambo chubhu inowanikwa kune vials yekuchengetedza zvichienderana nemamiriro ezvinhu: yemukati tambo uye yekunze tambo. Cryogenic vial s inokwanisa mune yekuchengetedza system mune tembiricha yakadzika se -196 ℃. Mhete yesilicone inoiswa mu screw cap kudzivirira hutachiona hunokonzerwa nekudonha kwemvura izvo zvinopedzisira zvave nechokwadi chekuchengetedzwa kwemaenzaniso mu cryogenic vial.
Ruvara-coded cap yekuisa inowanikwa mune mapfumbamwe mavara kuita cryogenic vial machubhu ave nyore kuziva. Kuchengeta nzvimbo uye kupedza kudzidza zvakanyatso kudhindwa chena pane chubhu yepamusoro yevashandisi vachimaka uye kuenzanisa. Ese masirafa eSorfa cryogenic akaiswa mumabhegi ane mbereko, RNase-yemahara, DNase-isina uye Isiri-pyrogenic.
1.This dzakateerana dzezvigadzirwa dzinotora kunze kwenyika-kujekesa polypropylene mbishi zvinhu, uye zvinopesana ne -80 ~ 121 ℃. Yakasimba spiral cap dhizaini, isina-chepfu O-mhete kudzivirira kudzivirira kubuda. Kana uchichengeta sampuli, hazvina kukodzera kuti uzadze iwo kudzivirira pombi kuputika. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ine matatu maratidziro e0.5ml, 1.5ml uye 2.0ml, uye manomwe mavara emabutiro aripo.
2.Imuviri wepombi unogadzirwa nepolypropylene zvinhu zvine yakanaka yakaderera tembiricha kuramba kuti chigadzirwa chigadzikane mune yakadzika tembiricha nharaunda.
3.Can kutsungirira yakanyanya tembiricha uye yakanyanya kumanikidza mbereko.
4.Mutumbi wechubhu unogona kusarudzwa uine kana pasina calibration mamaki.
5.No DNA / RNA enzayemu, hapana munhu DNA, hapana endotoxin.
6.Pane silicone mhete chisimbiso pakati peiyo tambo yemukati muhotera yechando yekuchengetedza pombi yekuvhara uye mutumbi wepombi, iyo inogona kuverengera iko kusimbisa kuita pasi pemhando dzese dzemamiriro akashata.
7.Made kubva muUPS Plastiki Kirasi VI Polypropylene.
8.Inowanikwa mu0.5 ml, 1.5 ml, 2 ml
Yemukati tambo uye yekunze tambo yesarudzo
9.U chimiro chemukati chepasi chehuwandu hwekushanda huwandu
10.Low tembiricha chengetedzo: -196 kusvika 121 ℃
DNase-yemahara, RNase-yemahara, isiri-pyrogenic
Sterilized kusvika padanho SAL 10-6
AIHWA. Vhoriyamu Tsananguro Cap Kurongedza / Ctns Mbereko
PC0005 1.5ml Vertical microtube Serew 8000 Inesarudzo
PC0006 2.0ml Vertical microtube Serew 6000 Inesarudzo
PC0007 0.5ml Vertical microtube Serew 8000 Inesarudzo
Pashure: Viral DNA / RNA Kuwedzera kit (Magnetic Beads)
Zvadaro: Reagent Bhodhoro
0.5ml Cryogenic ndiro chubhu
1.5ml Cryogenic ndiro chubhu